एक जवान "राउन्ड" जन्मदिन मिति, अर्थात् 20 वर्ष आउँदै छ भने, आफ्नो घनिष्ठ मान्छे कसरी उत्तम जन्मदिन बधाई बारेमा विचार गर्नुपर्छ। उहाँले कसरी इच्छुक हुन सक्नुहुन्छ? गरेको 20 औं वार्षिकोत्सव मा मान्छे बधाई मात्र होइन सुन्दर, तर पनि एकदम मूल हुनुपर्छ भन्ने तथ्यलाई सुरु गरौँ। आफ्ना सबै Undertakings उहाँलाई समर्थन उहाँलाई सबै सडक तपाईं सधैं कुनै कठिनाइ हटाउन मदत गर्न आवश्यक छ कि सम्झाउने खोल्न अघि कि आउन भन्नुहोस्।
तथापि, 20 औं वार्षिकोत्सव आफ्नो अभिवादन मान्छे - छैन विचार गर्नुपर्छ कि मात्र पक्ष हो। उसलाई हुनत यो सुरु गर्न लायक छ। त्यसैले, अधिक विस्तृत।
बधाई मान्छे 20 औं वार्षिकोत्सव - हामी पक्ष psihlogichesky विचार
के मित्र र आफन्तहरूको सिद्ध इच्छा हुनु आवश्यक छ? 20 औं वार्षिकोत्सव संग मान्छे गर्न बधाई बस खातामा मनोवैज्ञानिक पक्ष लिन बाध्य भएको छ। त्यहाँ केही जन्मदिन इच्छा हो, विशेष गरी यदि त तपाईं यसलाई उहाँलाई प्रसन्न हुनेछ भनेर थाह हुनुपर्छ। त्यो जवान क्लब संगीत प्रेम गर्नुहुन्छ भने एक नाइट क्लब एक जन्मदिन पार्टी, संगठित गर्न, छ। 20 औं वार्षिकोत्सव संग मजा अभिवादन मान्छे को बीचमा चरण देखि लाग्न सक्छ। यो छुट्टी अवसर को यो मात्र होइन नायक पाउनेछन्, तर पनि यसको सबै पाहुनाहरूलाई।
को जन्मदिन केटा यात्रा, वा एक ओछ्यान आलु को एक प्रेमी छ भने, त्यसपछि एक हल्ला पार्टी तपाईं पकड हुँदैन। उहाँलाई बधाई अचानक तपाईँलाई धेरै साधारण पिकनिक वा एक शान्त वातावरण हुन सक्छ एउटा निर्देशित भ्रमण प्रबन्ध मिलाए।
शायद आफ्नो मित्र आफ्नो खर्च गर्न चाहन्छ आफ्नो मनपर्ने संग जन्मदिन केटी। हस्तक्षेप छैन, बस टेलिफोन द्वारा congratulated, अलग कदम। पहिले नै पर्याप्त गम्भीर नयाँ परिवार सिर्जना गर्न - यो उमेर किनभने म, एक्लै प्रार्थना, जवान मानिसहरू गरौं। सायद दिन आफ्नो भविष्यमा निर्णायक हुनेछ।
र कसरी एक उपस्थित हुन छ गर्नुपर्छ जवान को अभिवादन आफ्नो जन्मदिन मा मानिस? 20 वर्ष - मिति, त्यसैले, एक सानो असंगत बोल्न। त्यसैले, "भयानक", हल्लाउँदै तपाईं गर्नुपर्छ दिन। आज, धेरै मानिसहरू पैसा प्रस्तुत "चिन्ता छैन"। निस्सन्देह, तिनीहरूले कुनै पनि समयमा, कुनै एउटा व्यक्तिले बस वयस्कता गर्न सुरु गरिएको छ, विशेष गरी यदि आवश्यक छ। अहिलेसम्म यो विचार राशि suffice भने, त्यो मामला मा उल्लेखनीय छ "एक राउन्ड।" एक जन्मदिन जस्तै यस्तो उपहार, उहाँले लामो गम्भीर कुरा पैसा बचत भएको छ भने।
तैपनि, पनि यस्तो वर्तमान कम्तिमा केही सस्तो कुराहरू लाक्षणिक अतिरिक्त अझै पनि थपियो आवश्यक हुनेछ। तर जन्मदिन को गतिविधिलाई आधारित। पुस्तक र कसैले - - एक जिम कसैले सीडी, कसैले गर्न खुसी हुनेछन्।
लिपि जीवित र मूल हुनुपर्छ
तर सबै छ। यसलाई थप र धेरै रोचक परिदृश्य टिप्न महत्त्वपूर्ण छ। 20 वर्ष पुरानो केटा - उमेर "पूर्ण मा" मजा र उसलाई र आफ्नो पाहुनाहरूलाई छ। त्यो हो, छुट्टी को संगठन मात्र होइन आफ्नो तत्काल परिवार को सिद्ध आफ्नो मित्र पनि हुनुपर्छ, तर।
जहाँ सुरु गर्न? निस्सन्देह, एक अभिवादन संग। उदाहरणका लागि, सबै अतिथि जोडी एक स्तम्भ प्राप्त गर्न सक्छन्, र एक नृत्य हल वरदान साथ सँगै हिंड्छन्। एक "घटना" सँगसँगै जस्तै हास्य पद, मे:
जो एक पंक्ति मा मार्चिङ छ?
हाम्रो पार्टी Yubilyarny!
जन्मदिनको, 20 वर्ष पुरानो,
जन्मदिन - सलाम!
जाने दिन को नायक गर्न टाढा,
तपाईं यहाँ दुःखी चाँडै फेंक महसुस!
का सँगै आराम गरौं!
दिन बधाई को नायक!
यो Solemn कार्यक्रम नेतृत्व गर्न सुरु गरेपछि। यो एक राम्रो मूड मा मात्र मान्छे सबै सपना साँचो आउने, उदाहरणका लागि सम्झँदा, लायक छ। तदनुसार, सबै मेहमान toastmaster समर्थन। जन्मदिन राम्रो मुड इच्छा र सिर्जना गर्न साँझ सुरू।
र त्यसपछि यो सबै मुड मा निर्भर गर्दछ र दिनको नायक तिनीहरूले मानिसहरूलाई निमन्त्रणा। यो नृत्य, र हास्यास्पद क्विजहरू र हास्यास्पद प्रतियोगिताहरु, र अनुकूल हुन सक्छ "मन्त्र!" मेहमान परम्परागत toasts र कविता मूल्यांकन हुनेछ।
असामान्य प्रतियोगिताहरु चयन
वार्षिकोत्सव समाप्त सर्वश्रेष्ठ सबैभन्दा रोचक मनोरञ्जन। नियम यस्ता कार्यहरू नृत्य पूरा गर्दै हुनुहुन्छ। तिनीहरूले किसिम को एक बिट हुन सक्छ। तिनीहरूलाई गर्न प्रतिस्पर्धी तत्व थप्न। उदाहरणका लागि, कुर्सियों सबै अतिथिहरूको राखे। , रही शरीर केही भागहरु सार्दा बिना नृत्य गर्न: तिनीहरूलाई अघि कार्य राखे। लागि स्टार्टर्स lezginka (सम्पूर्ण शरीर)। पछि - Gipsy (केवल काँध)। त्यसपछि - सक्नेभाँडो (एक खुट्टा)। पूर्वीय नृत्य (को पाठ्यक्रम, हात) - निश्कर्षमा। यस्तो प्रतियोगिता सबै उमेरका मनोरन्जन गर्नु हुनेछ।
जवान मानिसहरू र निश्चित थप impromptu कथा जस्तै। तपाईं कुनै पनि विषय छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। मुख्य कुरा उहाँलाई पिटे र सही अक्षरहरू छनोट गर्न रोचक र रमाइलो छ।
को जन्मदिन समर्पित सकारात्मक साँझ जारी गर्ने परिदृश्य को अन्त मा जवान मानिसहरू इच्छा भूल छैन। सबै आवश्यक सकारात्मक शुल्क र अविश्वसनीय गर्मी ऊर्जा आमन्त्रित कि शङ्का छैन।
तर तिहार को culmination - एक मान्छे 20 वर्ष को लागि एक केक। तपाईं के आवश्यक छ चयन गर्नुहोस्, र आफ्नो उपहार वर्ष आउन लागि सम्झना गरिनेछ!
फेब्रुअरी 23 - पद मा उत्सव को लिपि
Caroling र क्रिसमस र पुरानो नयाँ वर्ष कसरी schedrovat गर्न?
मई2- छुट्टी वा छैन?
को भित्री मा कला डेको
डेजी स्पा होटल3* (Nha Trang / भियतनाम) फोटो र समीक्षा
बच्चाहरु को बेडहरु को ठोस काठ देखि बंक
कलाकार Expressionists र आफ्नो तस्वीर
Reebok क्लासिक छाला - गुणस्तर र उचित मूल्य
"Vladimirka" - इसहाक Levitan को तस्वीर
एक व्यक्ति कुन उमेर बढ्दै छ सम्म? वृद्धि कार्यक्रम